संसारमा कम्ति मा १ अर्ब जनसंख्या एक्कासी गरिब हुने. भारत सबै भन्दा अघि. नेपाल को हालत उस्तै. यस्तो छ कारण. | DesBidesh
Nepal Fun|Facts Corona Nepse King Birendra Hitler
मिति परिबर्तन (BS To AD)
Menus / मिति परिबर्तन (BS To AD)
Bidesh 6/12/2020 6:31:42 PM
संसारमा कम्ति मा १ अर्ब जनसंख्या एक्कासी गरिब हुने. भारत सबै भन्दा अघि. नेपाल को हालत उस्तै. यस्तो छ कारण.
COVID-19 कोरोनाभाइरसको कारण संसारमा एक अरब भन्दा बढी मानिस दरिद्र हुन सक्छन्। सबैभन्दा गरीब जनसंख्याको ३९.५ करोड जनसंख्याको आधा भन्दा बढी मानिसहरू दक्षिण एशियाका हुनेछन्। यो एक हालको रिपोर्ट मा भनिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार दक्षिण एसियाको क्षेत्र सबैभन्दा बढी गरीबी हुनेछ र यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हुनेछ।
वास्तवमा, किंग्स कलेज लन्डन र अष्ट्रेलियाली नेश्नल युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले एक अध्ययनमा यो जानकारी दिएका हुन्। यो अध्ययन संयुक्त राष्ट्र युनिभर्सिटीको ग्लोबल डेवलपमेन्टल इकोनॉमिक्स रिसर्च केन्द्रको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको पनि छ ।
अध्ययनका अनुसार मध्यम आय वर्ग भएका विकासशील मुलुकहरूमा गरीबी सबैभन्दा बढी बढ्ने छ र समग्रमा गरीवीमा विश्वव्यापी वृद्धि हुने छ । अध्ययनका अनुसार यदि प्रति दिन १.90 डलरको आम्दानीलाई गरीबीको BASE-REFERENCE मान्ने हो र महामारी ले गर्दा येस्मा २० प्रतिशतले घट्छ भने थप 39 .5 करोड अत्यधिक गरिबको वर्गमा पर्नेछ। यसमा आधा भन्दा बढी मानिसहरू दक्षिण एसियाली देशका हुनेछन्।
यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र सम्भावित लाखौं विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्कने क्रममा नेपाल मानवीय विपत्तिको किनारमा पर्न सक्छ। एक अध्यन अनुसार विदेशबाट लाखौं नेपाली आप्रवासनको फिर्तीले खानाको लागि आन्तरिक माग बढ्न सक्छ, जुन आपूर्तिलाई मिल्न गाह्रो हुन्छ। यसले उच्च लागतको परिणाम दिनेछ जुन काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको छ र खाद्यान्न अभाव छ। यसअघिको आयातमा आश्रित नेपालले धानको निर्यातलाई अवरुद्ध गरिरहेको शक्तिशाली छिमेकी भारतबाट खाद्यान्नको आयात बढाउनु पर्ने हुन्छ। यद्यपि नेपाललमा विदेशी मुद्रा, पर्यटन र रेमिट्यान्सका मुख्य जेनरेटरहरू stop हुनाले देशको कमजोर अर्थतन्त्रलाई अझै कमजोर बनाउन सक्छ।
बिस्तृत लेख यहाँ link मा पढ्न सक्नु हुनेछ!
DesBidesh.com मा प्रकाशित सामग्री प्रति कुनै सल्लाह सुझाब वा प्रतिक्रिया भएमा कृपया हामीलाई येस ठेगाना मा इमेल गर्नु होला ! contact.desbidesh@gmail.com
फ्रिजमा के राख्नु पर्छ, के हुन्न, जानी राखौ.
9 तस्बिर जसले तपाईलाई समयको महत्व देखाउने छ || Recreating old photos for Fun
के तपाइँलाइ EDV-२०२१ पर्यो ? यसरी हेर्नुहोस नतिजा [भिडियो सहित]
शानदार सिंगर मात्र होइन, टीआरपी क्वीन पनि हो नेहा कक्कड़, हेर्नुहोस Slideshow [5 Photos]
Corona 6/4/2020 10:11:06 PM
© Copyright © DesBidesh.com
Powered by Rolpo Tech